निलुको जीवनको अन्तीम मेहेन्दी (Video) ! – plus977.net
मिस नेपाल २००२ माल्भिका सुब्बाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको यो भिडियो , जहाँ निर्देशक स्व. निलु डोल्मा शेर्पा निकै जली मुडमा देखिन्छिन । यो फुटेज नायिका निशा अधिकारीको बिहेको बेलाको हो । बिडम्बना यो मेहेन्दी नै निलुको जीवनको अन्तीम मेहेन्दी बन्यो ।
Nilu in Nisha Adhikari’s Mehandi with other friends
नेपाली सिनेमाले एक होनाहार कलाकर्मि गुमाएको दु:खद क्षणमा उनको आत्माको चिर शान्तीको कामना गर्दै शोक सन्तब्ध परिवारमा हार्दिक समबेदना प्रकट गर्दछौ ।
निलुको जीवनको अन्तीम मेहेन्दी !
मिस नेपाल २००२ माल्भिका सुब्बाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको यो भिडियो , जहाँ निर्देशक स्व. निलु डोल्मा शेर्पा निकै जली मुडमा देखिन्छिन ।
Posted by 977Online on Saturday, 1 July 2017
खडेरी लाग्यो फिल्मको व्यापारमा !